Created on Monday, 18 April 2016 15:25
नेपाल मगर संघ हङ्कङ्गका सस्थापक सल्लाहकार तथा भूपू अध्यक्ष,आदिवासि जनजाति महासंघ हङ्कङ्गका संस्थापक अध्यक्ष हुम बहादुर थापा (पचभैया )मगर, बेलायती सेनामा भर्ती हुनु अघि नै समाज सेवामा परिचित हुनुहुन्थ्यो । १५ बर्से जागिर पछि स्वदेशमै रहेर सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय थापा गएको फागून २२ गते चितवनमा सम्पन्न नेपाल मगर भुपु सैनिक तथा प्रहरी संघको केन्द्रिय अध्यक्षमा निर्बाचित हुनुभयो । गोरेबहादुर खपाङ्गी फाउण्डेशनका अध्यक्ष समेत रहनुभएका थापा, बिगत १० बर्ष अघि देखि नै राज्यसत्ता डट,कम नामक डिजिटल अनलाईन पत्रिकाको निर्देशक भई पत्रकारीतामा समेत सक्रिय हुनुहुन्छ । ठिमुरे,धोर्लीखरक पाल्पा निवासी थापा हाल काठमाण्डौमा बस्नुहुन्छ । अन्याय अत्याचार बिरुद्ध खरो उत्रिने थापाले आगामी बैशाख १८ देखि २२ गते सम्म चितवनमा हुन लागेको नेपाल मगर संघको महाधिवेशनलाई सहमतिका आधारमा सक्षम नेतृत्व चयनका लागी जोड दिदै आउनुभएको छ ।
प्रस्तुत छ मगर संघको महाधिबेशनलाई केन्द्रित गर्दे उहा संग मगर मिडिया डट कम का सम्पादक देब पचभैयाले गर्नुभएको कुराकानीको केही अंशहरु…
प्रश्न: भुपु सैनिक संघको बारेमा केही जानकारी गराईदिनुस न ?
धन्यबाद देब जी, मगर समाजमा भूपू सैनिकहरुको संलग्नता र योगदान बिर्सनै नसकिने लगानीे छ । मगर संघको विधानको धारा ५ उपधारा १७ (च) मा भूपूका बारेमा व्यवस्था भएपनि लामो समय सम्म आवद्धता पाएका थिएनौ भुपुहरुले । तर, उहाहरु संग लामै कस्साकस्सी परे पछि यही गएको चैत्र २९ गते चितवनको केन्द्रिय समिति बैठकमा हाम्रो समितिले ज्ञापनपत्र बुझायौ , आपसी छलफल र बहस गर्र्यो अनि हामीलाइ संघमा भातृ सस्थाका रुपमा स्वीकार गरिएको हो । भूपू सैनिक तथा प्रहरीहरुको सस्था २०६६ साल पुष १५ गते बुटवलका भूपूहरुले सुरु गरेका हुन् । २०६८ सालमा भूतपूर्व संघको चितवन अधिवेशनले मन बहादुर पुलामी मगर लाई अध्यक्षमा चयन गरेको थियो । २०७२ साल फागून २२ गतेको तेस्रो महाधिवेशनले मलाई नेतृत्व प्रदान गरेको छ ।
प्रश्न: भूपू र मगर संघ बिचको एकता वा सामिप्यता कस्तो छनि ? मगर संघलाई भूपूहरुले के कसरी सहयोग गरेका छन् ?
बीचमा केहि असहजता देखिए पनि अहिले विस्तारै सम्वन्ध सुधारिएको छ । नेपाल मगर संघलाई स्थापनाकाल देखिनै हरेक क्षेत्र र समयमा जुनसुकै सहयोग गर्न पछि परेका छैनौ । वास्तवमा भन्नेनै हो भने अहिलेको मगर संघको केन्द्रीय कार्यालय कलङ्कीमा रहेको भवनमा ९५ प्रतिशत भूपू सैनिक तथा प्रहरीहरु र तिनका आश्रित परिवारहरुबाट लगानी भएको छ ।
प्रश्न: धेरै बर्ष देखि मगर संघको भातृसंगठन हुन नसकेको भुपुलाई तपाई अध्यक्ष भएदेखि नै कसरी भातृसस्थाको मान्यता मिल्न पुगेको नि ?
विगतका अध्यक्ष ज्यूहरु काठमाण्डौ केन्द्रित नभएकोले मगर संघ सँग सामिप्यता हुन सकेको पनि हुन सक्छ । म यहि बस्ने र मगर संघका पदाधिकारी संग बढी मात्रामा उठबस भएकाले पनि हुन सक्छ । तर मेन कुरा के हो भने हामीहरु एक आपसमा घनिभुत छलफल र अन्र्तक्रिया गर्र्यो, एक आपसका मनका तिक्तmताहरु घुलित गर्र्यो, आपसका कमीकमजोरी स्वीकार गर्र्यो र सबै मिलेर मगर हितका कामा गर्ने हो भन्ने भएर संगै अघि बढ्ने गरी भातृ सस्थाको मान्यता पाएका हौ ।
प्रश्न: मगर संघको महाधिवेशनमा भुपुहरुको सहभागीता र पदाधिकारीमा कसरी प्रतिनिधित्व गर्दे हुनुहुन्छ ?
यो महाधिवेशन लाई प्रभावकारी बनाउन धेरै भन्दा धेरै जिल्लाहरुबाट भूपू,प्रहरी तथा सैनिकहरुलाई सहभागी बनाउदै छौ । मेरै नेतृत्वमा ३ जना प्रतिनिधि र २ जना पर्यवेक्षक गरी ५ जनाले महाधिबेशनमा भाग लिदै छौ ।
प्रश्न: मगर संघको महाधिबेशनमा अधिकांश भूपूहरु जिल्ला जिल्लाबाट प्रतिनिधि भएर आउदैछन्, उनीहरुले जसलाई सहयोग गर्छन् उनैले जित्छन् भन्नेहरु पनि छन् । भनेपछि भूपूहरु आफै नेतृत्व गर्न अघि सर्ने हो कि अरु कुनै पदमा बार्गेनिङ्ग गर्ने ?
अहिलेको मगर संघको विधानलाई मैले अध्यन गर्दा अलिक तानशाही जस्तो देखिन्छ,अर्थात सीन्डिकेट छ । भूपू मात्र नभएर राम्रो मान्छे मगर संघको नेतृत्वमा पुग्न लाई करीव १६ वर्ष कुर्नु पर्छ । अहिले बुद्धिजिवि मगरहरु राजधानीमा दिनहुँ विधानलाई खुकुलो बनाउने बारेमा बहस चलाईरहेका छन् । विधानलाइ यो महाधिबेशन बाट संशोधन गरेमा निश्चय पनि भूपूहरु नेतृत्वमा जान सक्नेछन् र सक्षम पनि छन् । कारण विगतका इतिहासले पनि भूपूहरुको नेतृत्वले मगर संघ यहाँ सम्म आइपुगेको प्रमाणित गर्दछ । विधानले बाधा दिएता पनि बार्गेनिङ होइन हाम्रो मगरलाई भन्दा पनि राम्रो मगरलाई हाम्रो सहयोग रहनेछ ।
प्रश्न: महाधिबेशनमा पुरै मोर्चा बन्दी र राजनैतिक गुटका आधारमा निर्बाचन हुन लागेको भन्ने हल्ला चलिरहेका बारेमा भुपु हरुले समाउने हागो कता होला ?
हो यो कुरा मैले पनि सुनेको छु , वास्तवमा यदि यो सत्य हो भने हाम्रो समाजको लागि घातक हो । मगर संघको नेतृत्वमा आउनको लागि कुनै पनि राजनितिक पार्टीको विचार बोकेर आउनु हुदैन । जो आएपनि चार वर्षका लागि विचार त्यागेर मगरको लागि केहि गर्छु भनेर आयो भने मगरको विकास र भलो हुन सक्दछ । अनि महाधिबेशनका प्रतिनिधिहरुले पनि यस बिषयमा ख्याल गर्नुुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने हामीले सक्षम नेतृत्वलाई मगर संघमा योगदान गरेका, मगर हकहितका लागी निरन्तर आवाज उठाएकालाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । जहा सम्म भूपूहरुले समाउने हागो कता होला ? भन्ने बारेमा भूपूहरु केही गर्न आफै सक्षम छन्, कसैको हागा समात्न आवश्यक देख्दिन । बरु नेतृत्वको अवसर पाएको खण्डमा मगर र मगर संघलाई धेरै उचाईमा लान सक्छन् भन्ने विगतका चार जना भूपू सैनिकका अध्यक्षहरु बाट पनि नमुना प्रस्तुत भइसकेको छ ।
प्रश्न: खास गरी भूपू सैनिकको संघलाई फराकिलो हुन सकेन, एउटा मात्रै दलको भातृसस्था जस्तो भयो, पुर्ब मेची देखि पश्चिम महाकाली सम्मका भूपूहरु अटाउन सकेनन् भन्ने बिगत देखि नै आरोप छ नि ?
यो गलत प्रचार हो, मगर संघले यस बिषयमा कुनै कुरा भनेको छैन। यदि यस्तो भएको थियो भने संघले कुनै प्रतिक्रिया वा सुझाब सल्लाह दिईहाल्नुपर्ने हो । तर साचो कुरा चाही के हो भने विगतमा नेपाल मगर संघले नै भूपू सैनिक तथा प्रहरीहरु लाई विधानको धारा ५ उपधारा १७ (च) मा व्यवस्था भएपनि आवद्धता दिएका थिएनन् । लामो संघर्ष पछि अहिले गएको चैत, २९ गतेको नेपाल मगर संघको चितवन केन्द्रिय समितिको बैठकको बहुमत सदस्यबाट हामीलाई नेपाल मगर संघमा आबद्धता दिईएको हो । नेपाल मगर संघको यो निणर्यलाई स्वागत गर्दै मगर संघलाई धन्यवाद सहित आभार प्रकट पनि गर्दछु । अव संगठन विस्तारको लागि मगर संघकै सल्लाह र सहयोगमा हामी देश दौडाहा निश्किसकेका छौ ।
प्रश्न: तपाईको ब्यतिmगत कुरा गर्दा लामो समय देखि सामाजिक क्षेत्रमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ, मगर संघको महाधिबेशन पनि नजिकिदै छ । के हामीले तपाईलाई मगर संघको केन्द्रिय समितिमा देख्न सक्छौ ?
हाहाहा…., संगै बसी काम गरौ भनेर धेरै साथीहरुले त बोलाइरहनु भएको छ तर, मैले जाने वा नजाने निर्णय गरेको छैन । त्यसको जिम्मा भूपू साथीहरुको नै हो । किन भने मैले मात्रै डिसिजन गरेर हुदैन । सबै भूपूहरु संग यस बिषयमा छलफल गर्नु आवश्यक छ । जे हुन्छ , सामुहिक निर्णय बाटै हुन्छ ।
प्रश्न: अव अलिकति फरक कुरा गरौ , मगरहरु लाहुरे भएरै पनि मगर हरु पछि परेका हुन् भनेर भन्नेहरुलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?
म यस कुरामा सहमत छैन । मगरहरु लाहुरे भएरनै शिक्षा,सामाजिक,आर्थिक र राजनितिक चेतना आएको हो । यदि मगरहरु लाहुरे नभईदिएको भए अरुले भने जस्तै भारी बोकेर जीविकोपार्जन गर्ने अवस्था आउथ्यो । अहिलेका जतिपनि डा.,प्रध्यापक,इन्जिनियर,वकिल,पत्रकार लगायत मगर नेताहरु जन्मेकाछन् भूपूकै छोरा भाई , ज्वाई चेलाहरु छन् । भनौन प्रथम शहिद लखन थापा,मास्टर मित्रसेन,बेलायतको सर्वोच्च युद्ध पदक भिक्टोरिया क्रस विजेता कुलवीर थापा मगर, कर्ण राना मगर, लालबहादुर थापा मगर,नेत्र बहादु थापा मगर शेरबहादुर थापा मगर र तुलबहादुर मगर गरी ६ जनाले भिक्टोरिया क्रस प्राप्त गर्न सफल भएका थिए । त्यस्तै अन्य महावीर पुन,रामबहादुर थापा बादल,गोरेबहादुर खपांगी,एम.एस.थापा,पूर्व आईजिपि कुवेर सिं राना,प्रा.डा.केशरजंग बराल मगर लगायतका व्याक्तिहरु लाहुरेहरुका सन्तान हुन् । उनीहरु त केहि उदाहरणका पात्र मात्रै हुन् । यसमा लाहुरेकै योगदान पक्कै बढी छ ।
प्रश्न: तपाई लामो समय देखि नै मिडिया चलाएर बस्नुभएको पनि छ । आखिर मिडियाको किन आवश्यकता हुने रैछनि ?
मिडिया राष्ट्रको चौथो अंग मानीन्छ । र मगरहरुलाई जनचेतना जगाउन पनि मिडियाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । मगरको मिडिया नभएकै कारण मगरहरु राज्यका हरेक निकायमा पछि परेका हुन् । मगरहरुले मिडियाको महत्व नवुझ्नाले मगरहरु राज्यको मुलधारमा आउन नसकेको मेरो बुझाई रहेको छ । नेपालीमा उखान छनि जसको जोत उसैको पोत भनेझै २९ प्रतिशत जनसंख्या हुनेहरुले मिडियामा पक्कड जमाएका छन् , राज्य सत्ताको मुलधारमा उनीहरुकोनै हालीमूहाली छ ।
प्रश्न: त्यसो भए मगर हरुले किन मिडिया चलाउनु पर्ने रैछनि ?
ठीक प्रश्न गर्नु भो , मगर ब्यक्तिmत्वहरुको कार्यक्रममा मैले धरै सहभागीता जनाई सकेको छु । राष्ट्रका मर्यादा क्रममा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन र व्यास्थापिका संसदका सभामुख ओनसरी घर्ती, मगर भएकै कारणले नेपालको मूलधारका संचार माध्यममा उहाहरुको समाचार बन्न सकिरहेको छैन ।
प्रश्न: तपाई भुपु सैनिक संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, भुपु वा लाहुरेहरुको पैसाको खासै सदुपयोग हुन सकेन, उनीहरु घर घडेरी जोड्ने मात्रैमा सिमित भए, लाहुरेहरुको रकम त औधोगिक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने भन्ने सुझाब निकै छ नि ?
त्यसो होइन, लाहुरेहरुले औधोगिक क्षेत्रमा पनि लगानी नगरेका होइनन्,लाहुरेहरु इमान्दार र सोझो भएको फाइदा उठाउदै यहांका चण्डाल र टाठा बाठा भनौदाहरुले लाहुरेहरुको लगानी डुबाइदिएका धेरै नुमना छन् । बुटवल औधोगिक धागो कारखाना,पोखरा बाट सञ्चालित पश्चिमाञ्चल भूपू सैनिक बस सेवा,अधिकांश इगिलिस बोर्डिङ स्कूल तथा निजि स्तरमा खुलेका अस्पताल लगायतका अन्य विकासक्षेत्रमा लाहुरेहरुको लगानीमा खोलिएका उधोग धन्दा बन्द भएका छन् । तर, अहिलेका लाहुरेहरु केहि सचेत भएका छन् । जस्तै काठमाण्डौमा मगरहरुले एकता फाईनान्स कोओपरेटिप सफल्ताका साथ सन्चालन गर्दै आएका छन भने देशका अन्य भागमा पनि आफैहरु अगाडी सरेर उधोग धन्दा स्थापना र संचालन गर्दै आई रहेका छन् । भूपू सैनिक तथा प्रहरीहरु शिक्षाका ज्योती हुन भन्ने प्रमाण नेपाल मगर संघ यूकेमा रहेका लाहुरेहरुको अहिले सम्मको सवैभन्दा ठुलो राशि एक करोड रुपैयाको लगानीमा स्नाकोत्तर र विधावारिधि गर्ने गरीब तथा जेहेन्दार मगर विधार्थीहरुलाई अक्षय कोष खडा गरेका छन् । त्यस्तै अर्का संस्था क्या.कुल प्रसाद पुन मगर र मनिराज पुन मगर लगायत अन्य भूपू मगरहरुको लगानीमा मगर विधार्थी उत्थान समाजको स्थापना गरी नर्सरी देखि स्नातक सम्मको अध्यनको लागि छात्रवृत्ति कोष खडा गरेका छन् । र देशको अन्य भागमा पनि भूपू सैनिक तथा प्रहरीको लगानीमा बिभिन्न बिकाशको काममा लगानी भैरहेको छ । तर यसको लागी पनि राज्यले बिशेष ब्यवस्था गर्नुपर्छ ।
प्रश्न: मगर सघलाई बलियो बनाउन भुपुको तर्फ बाट कुनै सुझाब वा योजनाहरु छन् कि ?
मगरहरुले बिभिन्न पार्टीमा आस्था राख्नु उनिहरुको नैसर्गीक अधिकारको कुरा हो,तर आस्थाकै भरमा सिंगो मगर समाजलाई ड्यामेज गर्ने गरी मगर संघमा कुण्डली मारेर बस्नु समाजको लागी घातक हो र मगर समाज बलियो हुदैन भन्ने कुरो नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ । माथीनै भनिसके मगर समाजको लागी आउने नेतृत्वले पार्टीको झोला जो कसैलाई सुम्पेर आएमा समाजले उनिबाट फाईदा लिन सक्दछ अर्थात समाज माथी पुग्न सक्दछ । नेपाल मगर संघले भूपू सैनिक तथा प्रहरीहरुको योगदानलाई कदर गर्न सके भूपूहरुको सहयोग पनि उपायोग गर्न सकिन्छ । बल्ल सबै मगर समाजको बिकास हुनेमा दुईमत देखिदैन ।
प्रश्न: अन्त्यमा के भन्न चाहानुहुन्छ ?
सर्वप्रथमत भूपू र नेपाल मगर संघ बीचको सम्बन्ध अझ सुमधुर हुनुपर्छ । लाहुरेहरुलाई संघले हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक हुनु पर्यो । लाहुरेहरुले पल्टनमा सिकेका ज्ञान र सिपलाई मगर संघले ग्रहण गरेमा मगरलाई मात्र नभई सिंगो नेपाललाईनै धेरै ठुलो फाईदा हुने देखेको छु । विदेशमा गएका मगरहरुको आफ्नो देश र मगरको लागी नसा नसामा मगरत्वको रगत बगेकाले मगरको नाममा संगठन खोलेर संगठित भईरहेका मगरहरुलाई मगर संधले सहयोग र हौसला दिनु पर्दछ । उनिहरुको रगत र पसिनाको कदर गर्न समाज पछि पर्नु हुन्न । बिदेश बाट मगरहरुले पठाएको रेमीट्यान्सलाई मगरीकरण गरी मगर समाजको बिकाशमा लगाउन संघ पछि पर्नु हुदैन । अन्त्यमा मगर मिडिया डट,कमले मलाई मेरो बिचार राख्ने मौका दिनु भएकोमा धन्यबाद सहित मगर मिडिया डट,कमको उत्तोरत्तर प्रगतीको कामना गर्दछु ।